Awood wax soo saar - Beijing Grip Pipe Technology Co., Ltd.
Ku saabsan awooddeena wax soo saar
Shirkadda Beijing Grip Pipe Tech Company oo xadidan waxay leedahay awood wax soo saar xoog leh, warshadda waxaa loo qaybiyaa 8 kooxood oo wax soo saar ah: processing sheet sheet, processing farsamo, caaryada processing, wax soo saarka caag, aan-caadiga ahayn farsamada iyo wax soo saarka qalabka korontada, shirkii wax soo saarka, alxanka wax soo saarka iyo wax soo saarka tijaabinta iyo kuwa kale.
Kooxda wax soo saarka birta xaashida: Qabashada Beijing waxay leedahay, laga bilaabo 20t ilaa 250t, dhammaan noocyada qalabka wax lagu dhejiyo ee saxanka goynta qalabka, foorarka qalabka, iwm;
Kooxda Mashiinka: Qabsashada Beijing waxay leedahay dhammaan noocyada xarumaha mashiinnada-saxnaanta sare, dhexroor wareegga ugu sarreeya waa 900mm, iyo warshad wax soo saar iskaashi oo dibadeed oo xoog leh.
Kooxda wax soo saarka caaryada: inta badan waxay mas'uul ka yihiin naqshadeynta iyo soo saarista dhammaan noocyada caaryada birta ah iyo caaryada wax soo saarka caagga;
Kooxda wax soo saarka Rubber: soo saar dhammaan noocyada shaabad tayo sare leh, sida NBR, EPDM, silica gel, viton / FKM, iwm
Kooxda soosaarida qalabka iyo qalabka korontada ee aan caadiga ahayn: inta badan waxay mas'uul ka yihiin R&D iyo soosaarida qalabka makaanikada iyo korantada oo leh shuruudo gaar ah oo aan badanaa suuqa lagu isticmaalin;
Kooxda wax soo saarka badeecada: waxay mas'uul ka yihiin isu imaatinka isku xidhayaasha tuubbooyinka iyo isku xirayaasha dhuumaha;
Kooxda alxanka: Qabsashada Beijing waxay leedahay dhowr qalab bir ah oo alxam ah oo alxam ah, oo ay ku jiraan mashiinka alxanka badan, mashiinka alxanka kaydinta tamarta iyo mashiinka alxanka AC, oo inta badan mas'uul ka ah habka alxanka ee alaabada;
Kooxda Tijaabada: Qabsashada Beijing waxay leedahay dhammaan noocyada qalabka baaritaanka cadaadiska, qalabka baaritaanka gariirka, qalabka tijaabada garaaca wadnaha, kuwaas oo loo isticmaalo baaritaanka wax soo saarka aan caadiga ahayn iyo kormeerka tayada wax soo saarka maalinlaha ah.